Burmese Movies | NEW BURMA MEDIA
Recommended Movies by New Burma Media
Click Here To Watch Thagyan Moe
Click Here To Watch Pan Pen Htlat Par
Click Here To Watch Zaw Ka Ka Nay The
Click Here To Watch Full Movie Click Here To Watch Full Movie
Recommend Links for Burmese Movies as follows:
Who are your favorite actors? Choose your favorite actors’ names below. Names are sorted by A-Z.
Click Here To Search by Actor and Actress name
Burmese Academy Award History
Best Editing မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေးသော ထူးချွန်ဆု (အကယ်ဒမီ) ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသည် ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီး ပထမဆုံး အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုပေးအပ်သည့် ခုနှစ်မှာ ၁၉၅၂ ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၂-ခုနှစ်နှင့် ၁၉၅၃-ခုနှစ်တို့တွင် ဇာတ်ကားဆု (၃)ဆု ၊ ပညာသည်ဆု (၂)ဆုဖြင့် စုစုပေါင်း ထူးချွန်ဆု(၅)ဆု ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
၁၉၅၄-ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးချီးမြှင့်သော ဒါရိုက်တာထူးချွန်ဆုကို ‘သြော်မိန်းမ’ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးသူ ဦးသုခမှ ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဇာတ်ကားဖြင့်ပင် ဦးသုခသည် အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆု (ဒုတိယ) ကိုရရှိခဲ့သည်။
၁၉၆၂-ခုနှစ်တွင် ထူးထူးခြားခြားစတင်ပေးအပ်ခဲ့သည့် ဆုမှာ ဇာတ်ပို့ဆုဖြစ်သည်။ ဇာတ်တစ်ခုလုံးကို အထမြောက်အောင် ပို့ပေးရသော သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် ဦးကျောက်လုံး နှင့် ဒေါ်မေနွဲ့ တို့မှ ‘အတွေ့’ ဇာတ်ကားကြီးဖြင့် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ပို့ဆုများ အဦးဆုံး ရရှိခဲ့ကြပါသည်။
မှတ်မှတ်ရရ ရုပ်ရှင်သမိုင်းတွင် ချန်လှပ်ထားမရသော သရုပ်ဆောင်မှာ အောင်ထွန်းလေး ဖြစ်သည်။ အောင်ထွန်းလေးသည် ၁၉၇၇-ခုနှစ်တွင် ‘အဖေတစ်ခု သားတစ်ခု’ ဇာတ်ကားဖြင့် ပထမဆုံးကလေးသရုပ်ဆောင် ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၁-ခုနှစ်တွင် ရွှေကိန္နရီရွှေစင်ရုပ်ဆု အပြင် ငွေသားနှစ်သောင်းကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားတွင် အများဆုံး အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်သော ဆုတစ်ဆုရှိသည်။ ထိုဆုမှာ ပရိသတ် ကို ငိုအောင် ရီအောင် ၊ ရင်ခုန်လှုပ်ရှားမှုကို သရုပ်ဖော်သည့် တေးဂီတဆုဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆုကို မြန်မာ့နိုင်ငံ၏ ဂီတဖခင်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဂီတလုလင် မောင်ကိုကို မှ ၁၉၉၁-ခုနှစ်တွင် ‘ မယ်သီတာလို မိန်းကလေး’ ဇာတ်ကားဖြင့် ပထမဆုံး ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၃-ခုနှစ်တွင် ငွေသားနှစ်သောင်းကို ချီးမြှင့်ခြင်း မပြုတော့ဘဲ ရွှေကိန္နရီရုပ်တွင် တပ်ဆင်သော ငွေကြယ်အစား ရွှေသားအစစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရွှေကြယ်ကို တပ်ဆင်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ရှားရှားပါးပါး ပရိသတ်သတိမထားနိုင်သည့် ပညာသည်ဆုတစ်ဆုကို ၁၉၉၄-ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်သမိုင်း၌ ထပ်တိုးချီးမြှင့် ခဲ့သေးသည်။ ထိုဆုမှာ ရုပ်ရှင်အသံဆုဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးရုပ်ရှင် အသံဆုကို ဦးခင်ဦးမှ ‘သရဖူ’ဇာတ်ကားဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။
ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံး အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုနိုင်အောင် အပြတ်အတောက်မရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနေသော သူများမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတည်းဖြတ်သူများဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကား၏ အဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြနေသော တည်းဖြတ် ဆုကို ၁၉၉၇-ခုနှစ်တွင် ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး ဦးမြင့်ခိုင်(မော်ကွန်းရုပ်ရှင်)မှ ‘သူ့ကျွန်မခံပြီ’ ဇာတ်ကားဖြင့် ပထမဆုံးရရှိခဲ့သည်။
ဇာတ်ကားဆု- မြေ၀၀န် (တတိယဆု) -အေ၀မ်း ကုမ္ပဏီ
အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု –မေမြင့် – (ပွဲခါညောင်ရေ)ဇာတ်ကား
အမျိုးသားပညာသည်ဆု- ဦးကျော်သောင်း– (ဖြေလျော့ခွေ)ဇာတ်ကား
ဒါရိုက်တာဆု- သာဓု– (ကကြီးရေ က)ဇာတ်ကား
အမျိုးသားပညာသည်ဆု – ထွန်းဝေ– (ကကြီးရေ က)ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု- မြတ်မွန်– (ကကြီးရေ က)ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု- ဒေါ်ခင် – (ကကြီးရေ က)ဇာတ်ကား
အမျိုးသားပညာသည်ဆု – မောင်သင်– (ရေမြေဆုံးတိုင်)ဇာတ်ကား ၊ (ချစ်သွေးသစ္စာ)ဇာတ်ကား ၊ (စိုးပါနဲ့မေ)ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု – မေသစ်– (မေတ္တာရွှေရည်)ဇာတ်ကား
အမျိုးသားပညာသည်ဆု –မြတ်လေး -(အမုန်းနောက်ဝယ်)ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု- ခင်ယုမေ– (ကိုယ်ပိုင်မေတ္တာ)ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု – ဒေါ်မေနွဲ့– (ရွှေရင်သိမ်းသစ်) ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု – ဝါဝါဝင်းရွှေ– (ချစ်သမီး) ဇာတ်ကား
အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု –စိုးရွှေ – (မြေမှာပွင့်သောမေတ္တာပန်း) ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု – ၀ါဝါ၀င်းရွှေ – (ချောင်းကိုပစ်၍ မေတ္တာရှာ) ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု – ဒေစီကျော်ဝင်း‎– (အားနွဲ့သူပါရှင်) ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု – ခင်ယုမေ– (ရွှေချည်ငွေချည်တန်းပါလို့)ဇာတ်ကား
အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု –မြင့်နိုင် – (ကျေးဂျူးကဘာ) ဇာတ်ကား
အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု –စိန်မြင့် – (အဖေတစ်ခုသားတစ်ခု)ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု- ၀ါဝါ၀င်းရွေ – (မိန်းကလေးရှင်ရဲ့ ဆန္ဒ)ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု – ဆွေဇင်ထိုက်– (မိန်းကလေးရှင်ရဲ့ ဆန္ဒ)ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု – ခင်သီတာထွန်း– (တစ်ခါကတစ်ဘ၀)ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု – မေယု– (နှင်းဆီနီအိမ်မက်) ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု –ခိုင်ခင်ဦး (မေတ္တာအင်္သချေ)ဇာတ်ကား
ရုပ်ရှင်ဓါတ်ပုံဆု – ဦးစံအေး- (ဗိုလ်သံခဲ) ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု –ခင်စိုးပိုင် -(ပန်းသီတဲ့ကြိုး) ဇာတ်ကား
အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု – ကျော်သူ– (တပြည်သူမရွှေထား)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု –စိုးမြတ်သူဇာ – (နော်ရင်မွှေး)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
ရုပ်ရှင်ဓါတ်ပုံဆု – ကိုကိုဌေး (ထိပ်တန်း) – (မသုဓမစာရီ)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
ရုပ်ရှင်ဓါတ်ပုံဆု – ကိုကိုဌေး (ထိပ်တန်း) – (မြင့်မြတ်နှလုံးသား)
အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု –နန္ဒာလှိုင်– (ရွှေနံသာစံအိမ်)
ရုပ်ရှင် ဇာတ်ညွှန်းဆု -ကိုကိုလေး – (အနှိုင်းမဲ့ရင်ခွင်)
အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု –ထွန်းအိန္ဒြာဗို– (နှောင်းတမြေ့မြေ့)
အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု – ထွန်းထွန်းဝင်း– (နှောင်းတမြေ့မြေ့)
ကလေးသရုပ်ဆောင်ဆု-အိသဲဖြူ – (ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ)
အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု –မျိုးသန္တာထွန်း – (နှုတ်ခမ်းထက်က ဓားသွား)
ဓာတ်ပုံဆု-ထိပ်တန်း ကိုကိုဌေး – (ကောင်းကင်ထက်ကပန်းတစ်ပွင့်)
ဇာတ်ကားဆု-မြင့်မြင့်ခိုင် (ဆန်ရေ) – စိမ်းဝါနီရုပ်ရှင်
ဇာတ်ကားဆု- (ငါသူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမ) – ကြယ်တံခွန်ရုပ်ရှင်
အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆု –လူမင်း – (ရွှေမှုန်ကြဲတဲ့ မိုးကောင်းကင်)
အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆု –ခင်ဇာခြည်ကျော် – (ငါသူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမ)
ရုပ်ရှင်အသံဆု – ခင်စပယ်ဦး အဖွဲ့ – (သူးမွဲထသစ္စာ)
ရုပ်ရှင်ဓါတ်ပုံဆု -ကိုကိုဌေး(ထိပ်တန်း) – (လျှို့ဝှက်သောနှင်း)
ဒါရိုက်တာဆု- (ညီညီထွန်းလွင်) – (အများနှင့်မသက်ဆိုင်သောသူ)
ဒါရိုက်တာဆု- မီးပွား (ဇော်ကကနေသည်)
အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု – နေတိုး – (မိုးညအိပ်မက်မြူ)
အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု – စိုးပြည့်သဇင် – (မိုးညအိပ်မက်မြူ)
ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု – ဓိရာမိုရ် – (ဇော်က ကနေသည်)
ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု – ဇော်မင်း (ဟံသာမြေ) – (ကျောက်စက်ရေ)
2010 Academy Awards List
အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု – ခင်မောင်ဦး၊ စိုးသိမ်းထွဋ် (ပင်လယ်ထက်က နေ၀န်းနီ)
အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု – မြန်မာပြည်ကျောက်စိမ်း (အငိုမျက်လုံးအပြုံးမျက်နှာ)
အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု – ဦးမြင့်ခိုင် (ပင်လယ်ထက်ကနေ၀န်းနီ)
အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု – ၀ါဝါအောင် (အမေ့ကျေးဇူးဆပ်ဖူးချင်တယ်)
အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု – ဝေဠုကျော် (ပင်လယ်ထက်ကနေ၀န်းနီ)
အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု – သက်မွန်မြင့် (အာဒမ်ရယ် ဧ၀ရယ် ဒဿရယ်)
အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု – ပန်းချီစိုးမိုး(ပင်လယ်ထက်ကနေ၀န်းနီ)
အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု – ပြေတီဦး (အာဒမ်ရယ် ဧ၀ရယ် ဒဿရယ်)
အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆု – ခင်မောင်ဦး၊ စိုးသိမ်းထွဋ် (ပင်လယ်ထက်က နေ၀န်းနီ)
အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု – ခင်စန္ဒာမြင့် (အာဒမ်ရယ် ဧ၀ရယ် ဒဿရယ်)
ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲဖို့ ဆန္ဒပြတောင်းဆို
မြန်မာပြည် လူအခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ဆဲဟု ကန် ပြောကြား
ရဲမိသားစုကို ဘာ့ကြောင့် အိမ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းသလဲ